सरकारले ३ सय वटा बिजुली बस किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार साझा यातायातलाई बस खरिद र संचालनको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदुषण रहित उपत्यका बनाउन विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना अन्तर्गत यो रकम दिइएको हो । साझा यातायातका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेले ३ अर्ब रुपैयाँ साझालाई प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए ।
१२ ठाउँमा सुरुङमार्ग, अध्ययनलाई कहाँ कति बजेट ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १२ ठाउँमा सुरुङमार्गको अध्ययन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । नौबिसे–नागढुंगा, सिद्धबाबा, खुर्कोट–चियाबारी, कुलेखानी–भीमफेदी, हेम्जा, लामाबगर, गुर्जेभञ्ज्याङ, दाउन्ने, थानकोट–चित्लाङ, कोटेश्वर–जडीबुटीलगायत स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन लागिएको हो ।
मेलम्ची खानेपानी : तयार भए १० रिजर्भ पोखरी
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानीको पानी संकलनका लागि राजधानीमा ९ वटा पानी पोखरी (ठूला पानी ट्यांकी) को निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । १० पोखरीमध्ये ९ वटाको काम सम्पन्न भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले ती पोखरीको परीक्षण मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ । अब ती पोखरीबाट उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा पाइपद्वारा पानी वितरण गरिने छ ।
सवारी प्रशिक्षण केन्द्र मापदण्ड विपरीत, १५ रोपनी जग्गा हुनुपर्नेमा ५ रोपनी मात्रै
यातायात व्यवस्था विभागले निजी क्षेत्रका सवारी प्रशिक्षण केन्द्रहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । भक्तपुरको राधेराधे सवारी चालक केन्द्र, चाबहिलको नेपाल ड्राइभिङ सेन्टरलगायत केन्द्र मापदण्डविपरीत रहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
ट्राफिक सहज बनाउन ३ करिडोर, कहाँ–कहाँ तोकिए ट्याक्सी स्ट्यान्ड ?
प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन उपत्यकामा तीनवटा करिडोर सञ्चालनमा ल्याएको छ । तीन महिना लगाएर उपत्यका ट्राफिक महाशाखाले धोबीखोला, विष्णुमती र मनोहरा करिडोरका ७ अवरुद्ध स्थान सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
स्थानीयले फर्काए मेलम्चीका ठेकेदार
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का पाएपछि आयोजनास्थल पुगेका ठेकेदारलाई स्थानीयले फर्काइदिएका छन् । सीएमसीले काम गर्दाको पारिश्रमिक नपाएका भन्दै पीडित व्यवसायीले बुधबार कार्यस्थल पुगेका श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदारलाई फर्काएका हुन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङसहित बाँकी निर्माणको काम गर्न ठेक्का आहवान गरेको छ । करिब ६ महिनादेखि ठप्प रहेको आयोजनाको काम अघि बढाउन ठेक्का आहवान गरिएको हो ।
‘वाग्मती ब्युटिफिकेसन’को काम दुई महिनादेखि ठप्प छ । सहरी विकास मन्त्रालयले मुआब्जा माग्दै आएका स्थानीयसँग छलफलसमेत नगर्दा ब्युटिफिकेसनको काममा अन्योल देखिएको हो । मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढन नदिने भन्दै स्थानीयले काम रोकेका छन् ।